🥇 ▷ Microsoft & # 039; s Studio ee Da'da Boqortooyooyinka looma xadidin doono sameynta ciyaaraha ✅
Microsoft & # 039; s Studio ee Da’da Boqortooyooyinka looma xadidin doono sameynta ciyaaraha
Daraasadda cusub ee Microsoft, Age of Empires, ma yeelan doonto ujeedka horumarinta ciyaarta. Intii lagu gudajiray E3dii hore waxaan ku arki karnay shirka in Microsoft ay soo saartay Production Double Fine Production, laakiin markii ay dhameysay bayaan ayaa ka soo muuqatay Xbox Wire halkaas oo daraasad cusub oo ku saleysan magaca Da’da Boqortooyada ay ku biirtay istuudiyaha hormarinta xisbiyada koowaad. Sababta aan sidaa loogu sii dhawaaqin ama loogu dhawaaqin qaab ahaan waxay u dhici kartaa iyada oo sababtu tahay in xilligan Da’da Boqortooyadu aysan ka tegi doonin PC-ga, ugu yaraan hadda.
Wax yar ka dib Jez Corden, oo caan ku ah taageerayaasha Xbox iyo tifaftiraha Windows Central, ayaa shaaca ka qaaday waxa noqon doona macluumaadka daraasaddan cusub, macluumaad si buuxda loogu diidey wareysiga uu siiyay warbaahinta PCGamesInside agaasimaha hal abuurka, Adam Isgreen, inta lagu gudajiray Gamescom 2019. Wareysigan waxaa lagu muujiyay in ujeedku yahay Istuudiyaha ‘Age of empires’ ee Microsoft ma aha midka lagu ciyaaro. Bayaanka mudnaanta leh wuxuu noqon karaa wax aan macquul aheyn laakiin Microsoft Ujeedada daraasaddan cusub ayaa ah in korjoogteynta daraasadaha kale ee dibedda loogu sameeyo horumarka saxda ah ee dhammaan cinwaannada la xiriira IP.
Waxaan leenahay koox gudaha ah, laakiin runtii waxaan kormeer siinay lamaanayaasheena cajiibka ah. Waxaan leenahay kooxdeena boqortooyo ee ilaaway ee sameeyey Edition of Definitive Edition oo Da’da udhaxaysa iyo inay kashaqeeyaan Da’da Boqortooyada II-Qeexid Daabacaad, laakiin waxaan kaloo leenahay koox kale oo Australia ah oo kusaabsan Tantalus Media iyo inay kashaqeeyaan Da’da Boqortooyada III. . Waxaan ku leennahay Relic gudaha Vancouver laakiin sidoo kale waxay caawiyaan daraasad kasta »
Sidaa daraadeed, Microsoft waxay leedahay dhowr koox oo mas’uul ka ah horumarinta iyo tuujinta Da’da ee Boqortooyada (IP), laakiin dhammaantood waxaa kormeeraya daraasaddan gudaha ah oo ay leedahay ‘Xbox Game Studios’.
“Doorkayaga Microsoft waa inaan u oggolaanaa horumariyayaashan waa weyn inay sameystaan ​​badeecadaha Age of empires kuwaa waxaa loo kormeerayaa si loo hubiyo in farriinta astaanta shirkaddu bixiso wixii aan u aragno waaya aragnimada waaya-aragnimada Boqortooyada. Way heli karaan da ‘kastoo ay yihiin waadna baran kartaa wax ku saabsan taariikhda, hadaad jeceshahay ama aadan jecleyn »
Markaa ugu dambeyntii waxaan ognahay masiirka daraasaddan oo ah mid aan wali laga warqabin.
Waqtigan xaadirka ah Da’da Boqortooyadu waxay sii ahaan doontaa IP gaar ah oo loogu talagalay PC, laakiin ka dib imaatinka keyboard-ka iyo jiirka ‘Xbox One’ iyo cinwaanno kale sida Halo Wars oo si fiican ula qabsaday koontaroolada, kama saari karno imaatinka sheekadan khuraafaadka ah. ilaa Xbox One. Waqtiga kaliya ayaa ku siin kara ama sabab leh.